प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण : चिकित्सा र राजनीति क्षेत्रमा परेका दुई प्रभाव – Nepali Health
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण : चिकित्सा र राजनीति क्षेत्रमा परेका दुई प्रभाव
२०७६ फागुन २४ गते ९:१९ मा प्रकाशित
गत बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । चिकित्सक साथीहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो दोश्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण सामान्य नागरिकको जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी नै भएको हो ।
सफल प्रत्यारोपणमा सबैको योगदान र शुभकामना अपरिहार्य थियो र छ । यसका लागि परिवार, समाज र आम नागरिक अत्यन्त खुसी छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदान प्रति जनता आभारी छन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका र गर्न प्रतिक्षा सूचिमा रहेका विरामीहरुका साथै शुभचिन्तकहरु स्वदेशमा हुने सफल प्रयारोपण पछि थप आशावादी र विश्वस्थ भएका छन् । र, यो पूरै देशवासीका लागि यो शुभ सन्देश पनि हो ।
नेपालमा हरेक बर्ष सयौंको संख्यामा मिर्गौला प्रयारोपण हुने गरेको छ सामान्य नागरिकको । दोस्रो पटक प्रत्यारोपण भएकाहरुको संख्या पनि थुप्रो छ । देशमा अब्बल चिकित्सकहरु छन् र यस प्रकृतिका प्रत्यारोपणहरु भै रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली यसअघि ठूलो खाले उपचार गर्न विदेश जाने गर्नुहुन्थ्यो । देशको विशिष्ठ व्यक्ति वा भनौँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री उपचारका लागि विदेश जाने विषय सामान्य प्रक्रिया हो । त्यसैले पनि होला मिर्गौला प्रत्यारोपणको हल्ला चल्नासाथ सम्भावित मुलुकहरुको नामै तोकेर समाचारहरु आए । समाचारमा आएजस्तै धेरैको अनुमान पनि त्यहि थियो ।
तर, धेरैको अनुमान गलत सावित गरिदिदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशकै र त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने घोषणा गर्नुभयो । आफ्नो दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गराउन नेपाली डाक्टर नै रोज्नु भयो । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले स्वदेश कै सरकारी अस्पतालमा नेपाली चिकित्सकहरुबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने विषय आँफैमा असाधारण थियो । शुभकामना सबैले दिएका छन्, यसलाई देशको गौरवका रुपमा लिनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो प्रत्यारोपणले चिकित्सा क्षेत्र र राजनीति क्षेत्रमा दुईवटा गहिरो सन्देश छाडेको छ ।
१. चिकित्सा क्षेत्र :
नेपालका कार्यकारी प्रमुखले स्वदेशकै चिकित्सकलाई विश्वास गरेर सरकारी अस्पतालमा दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनु चानचुने कुरा होइन । नेपाली चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण सहज ढंगले सफल पारे । यसले आम चिकित्सा क्षेत्रलाई गर्व गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
कुरा त्यतिमै मात्रै सिमित हुँदैन ।
अब यसको मतलब नेपाली चिकित्सकहरुले केपी ओलीको प्रत्यारोपण सफल भयो भन्नेमा सीमित हुने विषय भएन । अब आईन्दा विशिष्ठ ब्यक्तिको उपचार सफलतामा नेपाली चिकित्सकहरु अब्बल हुनुपर्ने थप बध्याता श्रृजना भएको छ । यसका लागि नेपाली चिकित्सकहरु आफ्नो क्षमता र दक्षतामा निपुण हुनुपर्ने बाध्यता श्रृजना भएको छ । नेपाली चिकित्सकहरुले बारम्बार आफ्ने शीप र दक्षता प्रमाणित गर्नु पर्ने कठिन तर सहज दक्षता तिखार्नु बाध्यता आएको छ । हामीलाई विश्वास छ यो काम पूरा हुनेछ ।
२. राजनीतिक क्षेत्र :
सामान्य रोगहरुको उपचारमा विदेशी अस्पताल र चिकित्सकमा विश्वास गर्ने राजनैतिक नेतृत्व अव सोच्न बाध्य छ कि विश्वस्तरीय उपचार नेपालमै सम्भव हुँदा विदेश जाने की नेपाल नै उपचार गराउने ? प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ठ व्यक्तिको उपचार स्वदेशमै सम्भव हुँदा बाँकी राजनैतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको उपचार नेपालमा सम्भव हुने की नहुने ? देशको कार्यकारीको जटिल उपचार स्वदेशमा हुने कुराले नेपाली चिकित्सकको क्षमातामा विश्वास गर्ने की नगर्ने ?
देशका कार्यकारीको उपचार यहि हुन्छ भने अब मुख्य मन्त्रीको उपचारका लागि किन विदेश जाने ? अथवा जानै परे पनि पहिले यहाँ किन नदेखाउने ? यसले सामान्य स्वास्थ्य बिग्रँदा विदेश जाने उच्च व्यक्तित्व राजनीतिक नेतृत्वलाई गजब सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो सफल प्रत्यारोपणले अब आम नेताहरुको रोजाई सरकारी अस्पतालमा हुनै पर्ने सकारात्मक बाध्यता श्रृजना गरिदिएको छ ।
यति मात्रै होइन अब अस्पतालमा व्यवस्थापनमा पनि यो प्रकरणले सकारात्मक दवाव श्रृजना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको जटिल शल्यक्रिया स्वदेशको सरकारी अस्पतालमा भएको विषयले बाँकी सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालहरुलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिएको हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री सांसद तथा अन्य उच्च अधिकारीहरु सरह आमनागरिक समेत त्यही विशिष्ठ सेवाको अपेक्षा गर्दछन् भन्ने हेक्का व्यवस्थापकहरुमा समेत हुनुपर्ने चेत पलाउन जरुरी सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ ।
कोभिड-१९ परीक्षण : पछिल्लो चौविस घण्टामा ७३ जनाको परीक्षण, ९९ जना आइसोलेसनमा
सरकारद्धारा ओम्नी ग्रुपसंगको मेडिकल सामग्री खरीद सम्झौँता रद्ध
सातवटै प्रदेशबाट कोभिड -१९ परीक्षण, पाँचवटामा पोर्टेवल मेसिन, एक घण्टामै रिपोर्ट आउने
‘सम्झौँता अनुसारको मेडिकल सामग्री आयो कि आएन ?’ अनुमगन गर्न बन्यो समिति
स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरबेटीलाई भन्यो, ‘महामारी भए स्वास्थ्यकर्मी तपाईँको घर बस्न आउँदैनन्, अहिले नै नआत्तिनुस्’
वीर अस्पतालमा सोमबार मृत्यु भएका पुरुषमा पनि देखिएन कोरोना
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २५ जना नर्सका लागि रोजगारीको अवसर
ह्याण्ड स्यानेटाइजर तीन गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने पक्राउ
वीर अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलाको पनि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
४ चैतमा कतार एयरवेजबाट आउनेले यी नम्बरमा फोन गर्नुस्